दाई, यो खुशी दैबले देख्न सकेन, अर्काे जुनीमा सँगै भइनेछ
कलशा शाही/ जेष्ठ ८, 2077
मेरो प्यारो दाई,
हजुरले हामीलाई छोडेर गएको पनि १ बर्ष भैसक्यो । दाई हजुरको आत्माले शान्ति पाओस् । यो पापी दैबले हजुरलाई हामीबाट टाढा लगे पनि हजुरका यादहरु सदैव हाम्रा साथ रहने छन् । हजुरले सानैदेखि गाउँबाट शहर लिएर आईस्यो र जीवनमा ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ भनेर सिकाईस्यो । सदैव राम्रो बाटो हिँड्न राम्रो काम गर्न सिकाइस्यो ।
हजुर हुँदा र हजुर नहुँदा जिन्दगी निकै फरक छ । दाई हजुर हुँदा हामी खुशी थियौं । तर अहिले खुशी भन्ने शब्दमा मात्रै छ । दाजु पहिला केहि कुराको कमी थिएन । तर अहिले सबै कुराको अभाव छ । दाई अब हजुर आईसिने आसा पनि मरिसक्यो । हजुर हुँदा म छँदैछु, तिमीहरूलाई केही हुन दिन्नँ भरेर सम्झाई बुझाई गरिसिन्थ्यो । तर अहिले हजुरले हामीलाई छोडेर गएपछि हामीलाई सम्झाउने कोही छैन ।
सानाबाट ठूलो बनाईस्यो । केही नबुझ्ने थियौं । बुज्ने बनाईस्यो, सपना नभएका आँखामा । ठूला सपना देखाएर हामीलाई बीचैमा छ्ट्कै गैइस्यो । यो पापी दैबले हजुरसँगै हाम्रो दाई भन्ने नाता सदाका लागि खोसेर लग्यो । यो साईनो न त किन्न नै मिल्छ, न त फेरि जोड्न नै सकिन्छ । हाम्रो जीवनमा धेरै दाई होइसिन्छ । तर हजुर होइसिन्न दाई । एउटा सानो घरमा ठूलो छोरा भएर सबैको खुसी बोकेर आँखामा ठूलो सपना सजाएर सबै जिम्मेवारी लिएर घर छोडेर हिडेको बेला सबै रोएका थिए ।
आफुँले पढेर हामीलाई पनि पढाउनका लागि यो बिरानो शहरमा ल्याईस्यो । तर गन्तव्यमा नपुग्दै यो पापी दैबले हामीबाट खोस्यो । यति छिट्टै छोड्ने मन रहेछ । त्यसैले आफुलाई भन्दा धेरै माया हामीलाई गरिसिन्थ्यो । दुई दिनका लागि जिन्दगीमा खुसी देखाइस्यो । तर यो खुशी सदाका लागि हाम्रो भाग्यमा रहेनछ ।
दाई साना भाईलाई मुवा बुवाबाट छुटाएर ल्याईस्यो । यहाँ हुर्काईस्यो । अहिले आएर टुहुरा जस्तै यो अन्जान शहरमा छोड्स्यो । मुवा बुवाको ठूलो साहाराहरु नै होइसिन्थ्यो । तर जुन दिन हजुरले छोडेर गैस्यो, त्यो दिनबाट हाम्रो सबै साहरा बेसाहारामा परिणत भयो ।
दाई म बाचा गर्न चाहन्छु, तपाईंको देशप्रतिको माया र हजारौं ती गरिब दुःखीको सपनालाई साकार पार्न म निरन्तर तपाईंले देखाएको परिवर्तनको बाटोमा निरन्तर लाग्ने बाचा पनि गर्न चाहन्छु । म मात्रै नभए हजारौं परिवर्तनकारी देशभक्त राष्ट्रप्रेमी नेपाली दाजुदाई दिदी बहिनीहरु निरन्तर परिवर्तनको खोजी गर्दै अहिले पनि जेलनेलमा हुनुहुन्छ । एकीकृत जनक्रान्ति हुँदै बैज्ञानिक समाजवादको यो महान अभियानमा मेरो पनि अबिराम भुमिका रहने छ । तपाईको सपना पूरा गर्न प्रतिवद्ध छु दाई ।
दाई अझैँ पनि मोबाइलमा घण्टी बज्दा कतै दाईको फोन आयो की भनेर हेर्ने गर्छु । तर बर्ष भैसक्यो हजुरको फोन आएन दाई । म बेलुका आउँछु भने गैस्यो दाइ । तर यहाँ १ बर्ष भैसक्यो आईसिन्न । भाईहरुले खोइ दाई भनेर खोज्छ्न । दाई म के जवाफ दिनु भाईहरुलाई ? हजुर कता होइसिन्छ दाई ? हजुर नहुँदाको यो जिन्दगी ओलिएको फुल जस्तै भएको छ ।
हजुरमाथि दुश्मनको आखा लायो दाई आफ्नै अगाडी रगतको खोला बगेको देख्न पर्यो । जुरको रग’त खेर जान दिने छैन दाई । त्यसको बदला जसरी पनि लिनेछु । देशको लागि बलिदान दिस्यो दाई । यति कलिलै उमेरमा आफ्नो जीवनको प्रबाह नगरी देश जनताको मुक्तिको लागि भएको बलिदानको उच्च कदर गर्दै तपाईंको अधुरो सपनालाई साकार पार्नेछु दाई ।
दाई हजुरलाई गुमाउनुको पीडा हामीलाई मात्रै थाहा छ दाई । न त पार्टीलाई न त अन्य कुनै । किन कि हजुरको ठाँउमा अर्को ब्यक्ति बस्छ्न् । तर हाम्रो जिन्दगीमा चाहेर पनि हजुर आईसिन्न दाई । जसरी हामिसँग खुशी रहने दाईलाई दैब तैले खोसेर लगिस् । त्यसरी नै मेरो दाईलाई सदै सुखी राखिदिनु ।
हामीले हजुरलाई नदेखे पनि हजुरले हामीलाई देखिसिन्छ होला माथीबाट भए पनि सधैं माया गरिराख्नु दाई । बिपनामा नभए पनि सपनामा आउनु है दाई । पूरा जिन्दगीमा सँगै नभए पनि थोरै समयको लागि भए पनि धेरै माया गरिसियो । यो खुशी दैबले देख्न सकेन दाई ।
अब यो जन्ममा म चाहेर पनि भेट्न् सक्दिन दाई, अर्को जन्ममा हाम्रो भेट अबस्य हुने छ ।
उहि हजुरकी प्यारी बैनी
✍️ कलशा शाही
(२०७६ जेठ १२ गते काठमाडौंको अनामनगरस्थित घट्टेकुलोमा भएको कुकर बम विस्फोटमा परि मृत्यु भएका प्रज्ज्वल शाहीकी बहिनी कलशा शाहीले दाईको सम्झना लेखेको पत्र)
किसुनजीका प्रिय पात्र, जो अमेरिकामा यसरी बने संकटमा सुचनाका संवाहक
फिलाडेल्फिया (अमेरिका) । विसं. २०६६ साल चैत ७ गते शनिबारका दिन काठमाडौंको मण्डिखाटारस्थित सुजाता ...
‘नआत्तिनु हजुरको छोरी झन मनोबल उच्च बनाएर रोगलाई परास्त गरेर कर्ममा फर्किन्छे’
काम गर्दै गर्दा कोरोना संक्रमित भएछु । स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद । म एक नर्स...